अब नेपाल टेलिकमबाट इन्टरनेट भारी छुट ! कसरी चलाउने त ? थाहा पाईराखौ — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचार, सूचना प्रविधी → अब नेपाल टेलिकमबाट इन्टरनेट भारी छुट ! कसरी चलाउने त ? थाहा पाईराखौ
अब नेपाल टेलिकमबाट इन्टरनेट भारी छुट ! कसरी चलाउने त ? थाहा पाईराखौ
August 10, 2015७१२ पटक
नेपालको सबैभन्दा ठूलो दुरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले आफ्ना सेवाग्राही संख्या १ करोड २५ लाख पुगेको जानकारी दिएको छ । गत चैत महिनाको तथ्याङ्कले नै टेलिकमका सेवाग्राही संख्या १ करोड २४ लाख ६८ हजार पुगिसकेको जानकारी दिएको हो ।
टेलिकमका अनुसार जिएसएम मोबाइल सेवाका ग्राहक १ करोड ४ लाख ४८ हजार, सिडिएमए सेवाका ग्राहक १३ लाख ५५ हजार तथा पिएसटिएन टेलिफोन सेवाका ग्राहक ६ लाख ६४ हजार ५ सय रहेका छन् । चैत मसान्तसम्म कम्पनीको डाटा सेवाका प्रयोगकर्ता ६२ लाख २३ हजार पुगेका छन् ।
फागुनदेखि चैतसम्म एक महिनाको अवधिमा २ लाख ८४ हजार कुल टेलिफोन ग्राहक थपिएका छन् भने ८९ हजार डाटा सेवाका प्रयोगकर्ता थपिएका छन् ।
इन्टरनेट चलाउने भए टेलिकमको यो सूचना पढ्नुस्ः
WiFI Hotspots प्रयोग गरिरहनु भएको छ ?
विभिन्न स्थानमा वाइफाई हटस्पटमार्फत इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ । ती स्थानमा WiFi मार्फत इन्टरनेट चलाउनको लागि GSM तथा CDMA पोष्टपेड÷प्रिपेड मोवाइलको म्यासेज बक्समा गई WiFi टाइप गरी १४१६ मा म्यासेज पठाएपछि प्राप्त हुने पासवर्ड प्रयोग गर्न सकिन्छ । उक्त पासवर्डबाट एक घण्टासम्म इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ भने सो पासवर्डको भ्यालिडिटी पिरियड २४ घण्टा कायम रहन्छ । साथै उक्त सेवा प्रयोग गरे वापत ग्राहकहरुको मोबाइलबाटै रु. १०।– कट्टा हुन्छ ।
नेपालभर रहेका WiFi Hotspots को जानकारी लिनका लागि NT Hotspot Locator नामक Mobile APP उपलब्ध छ । यसको प्रयोग गरेर आफु नजिक रहेका WiFi Hotspots बारेमा थाहा पाउनुका साथै WiFi Hotspots Service Subscribe समेत गर्न सकिन्छ